Ka dib markii Raadka waa barnaamij aad wax ku ool ah in xitaa qaab caadiga ah waxay keeni karaan dhibaatooyin la taaban karo oo la malaha marnaba si buuxda u filayaa tan iyo Adobe, si kastaba ha ahaatee mid ka mid ah wax weyn oo ku saabsan alaabta la badashada tago fur oo kaa caawin kara qalabayn qaar ka mid ah saamaynta kuwa ama xitaa ku dar qalab cusub si aad Arsenal.
Iyadoo taas maskaxda, halkan waxaan ku qor doonaa tago 10 fur sare ee dib markii xaalkaas soo at qiimaha yaab waxba, haa, iyagu dhammaantood waxay gebi ahaanba bilaash ah.
1. ObviousFX Copy-Image koronto ee
Marka hore aan liiska waa fur ah mid aad u fudud in, si kastaba ha ahaatee waa sida timesaver ah in ay tahay xaqiiqo fur ah in waa in liiska kasta. Copy-Image ku darayaa amarka hal menu edit ah, ku dheh, iyagoo 'Copy Image'.
Waa maxay amarka ah in falaa, in click hal, waa fidi oo nuqul ka kooban waqtigii loo doortay in ay sabuurad, waxaad suuro gelin in paste barnaamij kasta oo kale, sida Photoshop, oo aan u baahan in ay dhex maraan socodka ah ee lagu badbaadinayo ah jir si file ah image iyo wixii la mid ah in ka mid ah sanduuqa ka dib Dhibaatooyinka u baahan yahay. Ma baddali kulan si kasta ha ahaatee, laakiin aad u badan waqtiga baado ah, si fiican u qalantaa.
2. Video Copilot Presets - sabers Light
Waxba dunida ka wanaagsan tahay Saber fudud, iyo nasiib noo Video Copilot ayaa na siiyay horena lacag la'aan ah si ay u abuuraan! Video Copilot si dhab ah u soo saaraan 30 presets lacag la'aan ah oo taabanayay tiro balaadhan oo ah qalab, laakiin kaalinta 2aad boggayaga liiska waxaan kaliya oo aan is-hor taagi kari lahaa qalab Saber light. Waxaa la iman set oo dhamaystiran of fursadaha iyo kuu ogolaanaya in aad bedesho midabada, aragtiyo, ku dar isku dari kara mooshin oo xitaa ka mid ah awoodda si loo jilo Saber kor u rasaas iyo xidho. Just darto saamaynta wanaagsan!
3. AE Abuulahab,
Tani waa saamayn jecel yahay in abuuraa fractals midab qurux badan in la dhaceen karo. Iyadoo fursadaha midab, baaxad ahaan, cufnaanta iyo wixii la mid ah ay sidoo kale aadka u customizable in laguu suurogeliyo in aad hesho saamayn saxda ah ee aad ka dib markii yihiin. Waxaa jira isticmaalka badan oo Waayo, kuwaas oo ka intros iyo wixii ka dambeeyey, waxay Fali eegi cajiib ah oo aad si fudud u isticmaalaan. Inkastoo ay jiraan fara badan ku bixisay plugins in saameyn la mid ah soo saari karin, taas oo ka mid ah waa lacag la'aan.
4. caadi ah by 3DCG
Tani waa fur ah ee la shito iyo Vivtoria aad footage, laakiin sababta ay tani mid u taagan kor fur kale oo lacag la'aan ah utilities nalalka waa in ay tahay mid ah sida tayo sare leh, ka buuxaan muuqaalada xirfadeed si loo abuuro qaar ka mid ah saamaynta cajiib ah. Awood-siinta nalalka walxaha 3D ka toos jir ah, wax ahaa gudahood, aan aad u dheer ka hor, domain ah ee baakadaha qaali ah, halkan waxaad heli kartaa ka shaqeynayaan in ay gacanta oo bilaash ah.
5. Typominal - Digital teebka Text horena
Ma aha wax aad u isticmaali doonaa maalin kasta, si kastaba ha ahaatee, waa horena weyn wax yar u leedahay in la heli karo, iyo sida ay tahay lacag la'aan ah, sababta ma uu doonaynin in aad? Typominal waxaa laga codsadaa in lakabka qoraalka ah, iyo hurinta fiirin terminal computer ah ee qoraalka ah. Waxaa ku jira doorasho laba nooc dulqabo oo waa mid aad wax ku ool ah ee waxa ay qabato. Ka fakar in goobta bilowga Alien, laga yaabaa xataa Wargames, waxaa jira meelo badan oo ay ku haboon style in, sheekooyin sayniska gaar ahaan. No, ma noqon doonto go a in horena mashruuc kasta, laakiin mashruuca midig, waa saameyn fantastik ah.
Kanu waa Mac kaliya, laakiin waa xirmo sida dhamaystiran oo ah in ay si dhab ah u leeyahay in aan halkan lagu daro. Haddii aad qabto madal ay xaq u leeyihiin in ay u isticmaalaan, waxaa jira ciidan dhan fursadaha aad heli gudahood pack this hal, iyadoo 44 tago fur oo kala duwan oo ay ku jiraan 10 saamaynta text firfircoon, oo dhan lacag la'aan iyadoo waqti go'an, watermarks ama wax. Qof kasta oo raadinaya xirmo guud ee tago fur si loo kordhiyo fursadaha ay, taas oo ka mid ah kuwa ugu waa hubaal waa. Aad u badan ka soo baxay xirfad laga shirkad xirfadeed, si bilaash ah!
7. Instagram furaysto in ay Cineblur
Tani waa mid fudud oo kale, laakiin aad u faa'iido badan. Waxaa aad u saamaxaaya in ay shabahaya filtarrada Instagram in ay si fiican u yaqaan, in aan ku xuso caan ah oo la malaayiin ah. Waxaad u dhigma kartaa ilaa la footage mobile ee Intro ah malaha, ama aad rabtid in la siiyo sugaya in aad footage, wax kasta oo sababta, waxa aanu shaqada si fudud oo effectively.Another fur oo lacag la'aan ah in uusan haysan tiro balaadhan oo ah isticmaalka laakiin waa mid aad wax ku ool ah in ay sameeyaan waxa ay tahay inay u sameeyaan. Waxaad doonaysaa in aad eegtid Instagram ee video? Tani waxa aanu ka mid click. Wixii lacag la'aan ah.
8. Video Copilot Milicsi koronto In
Video kale Copilot furaysto halkan, oo waxaa la siiyey tayada lacag la'aan ah qurbaannadooda maaha wax lala yaabo. Si ka duwan Saber iftiin hore furaysto in, Kanu waa caadiga waxoogaa ka badan in ay la isticmaalo. Abuuritaanka shakhi xitaa xagal aan loo aabo yeelin, saamaynta yahay, sida aynu soo ay ka sugayaan Video Copilot, si fudud u cajiib ah oo u fudud in ay fuliso. Sida abid, ay xitaa soo saaray a guide video free kaa caawinaya in aad hesho si aad ku duuban waxaa la iyo aad u hesho sida ugu fiican ee ka mid ah awoodaha ay.
Tani waxay la mid falaa dhab ahaan waxa u muuqataa sidii ay qabato, waxay abuurtaa Christmas caleemo geed iyo laamo aad u. Waxay la dhaceen karo, inay aad u macquul ah oo ay ku qumman yihiin mashruuca fasax Kiinteistö kasta. Sidoo kale waxaa jira fur saaxiibka in loogu yeero wax sharraxsan, in sidoo kale waa lacag la'aan kuu oggolaanaysa in aad u qurux badan la abuuro geed qurxinta Christmas u sudhaan ka geedaha cusub ogaaday. Labada waxyaabaha aadka u customizable oo aad wax ku ool. Haa, arrimaha ay ugu yeeranayaan ugu ekaan kartaa wax ka yar oo halis ah, balse waa waxyaabaha tayo sare leh oo awood u leh wax soo saarka aad u macquul ah, xoogaa kaftan ah fasaxyada iyo qalab khatar ah oo dhan ee hal.
10. Magic rasaas Quick Fiirinta Free
RedGiant sameeyo qaar ka mid ah ins fur tayo gaar sare, iyo doorasho si xor ah waa laga reebo lahayn. Inkastoo waxaa ka maqan miday ka mid ah bixisay tago fur, in la fahmi karo, laakiin waxa aanu leeyihiin waa 20 presets dhibaatooyinka midabka si ay u kiciyaan muuqaal u eg ka filimada kala duwan feature, oo ay ku jiraan The Matrix iyo Saving Private Ryan. Kuwan waxaa ka mid ma wada tuuray freebies, kuwani waa presets muunad ku jira xadka badan sii ballaadhan oo ka mid ah bixisay wax soo saarka, si wax soo saarka ah oo xoogan si xirfadeysan u soo free. Waxa ka fiican tahay in aadan heli karin.
Waxaa jira fursado badan oo loogu tago fur u ah ka dib Dhibaatooyinka in aad run ahaantii ka heli kartaa aalad si ay u sameeyaan wax badan, laga yaabee in waxa ugu weyn ee aan ka qaaday cilmibaarista galay tan 10ka liiska waa in xaalado badan, kuwaas oo alaabta lacag la'aan ah waa sida karti leh iyo xirfad soo saaray sida wax bixisay fur in halkaas. Iyaga Fiiri ka hor inta qarash aad lacag caddaan ah.
> Resource > Free > Top 10 Best Free ka dib Dhibaatooyinka plugins u Video Faalladaada